आजदेखि देशभर कोरोनाविरुद्ध कोभिशिल्ड खोप अभियान शुरु - बडिमालिका खबर
१२० खोप केन्द्र, अस्पताल प्रमुखले खोप लगाएर अभियानलाई आगडि बढाउने
काठमाडौं—कोरोनाभाइरस कोभिड—१९ विरुद्धको खोप अभियान बुधबार अर्थात आजबाट देशभर सुभारम्भ हुँदैछ । बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिशिल्ड खोपको महाअभियान भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेपछि देशभर एकैसाथ सुरु हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशभरका ६२ अस्पताल र १ सय २० वटा खोपकेन्द्रबाट खोप अभियान सुरु हुँदैछ । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोनाविरुद्धको कोभिशिल्ड खोप १७ खोपकेन्द्रबाट दिइदैं छ । कोभिशिल्ड खोप अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेका औषधि उत्पादक कम्पनीले सयुक्त रुपमा भारतमा सेरम इस्सिच्युटमार्फत उत्पादन गरेको हो । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा माघ ८ गते कोभिशिल्डको १० लाख खुराक (डोज) खोप नेपालले प्राप्त गरेको हो ।
सरकारले अनुुदान सहयोगमा आएको कोभिशिल्ड खोप पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत फ्रन्लाइनरलाई दिने योजना बनाएको हो । पहिलो चरणमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्ति तथा चालक, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक र सहचालक, प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न फ्रन्टलाइनर वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, खोप केन्द्र खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक, शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्ति, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अन्तरराष्ट्रिय प्रवेश सीमा नाकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारी, वृद्धाश्रमका व्यक्ति तथा हेरचाहमा खटिने कर्मचारी एवं कारागारका कैदी र सुरक्षाकर्मीलाई खोप दिइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल संक्रमण फैलिएको १ वर्षपछि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुन आँटेको हो । चीनबाट स्वादेश आएका एक युवकमा संक्रमण गत वर्षको माघ १० गते पुष्टि भएसँगै पहिलो संक्रमितको उपचार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल भएको थियो ।
महामरीको सुरुवाती चरणबाटै कोभिड अस्पतालको रुपमा परिचित टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी र अग्रमोर्चामा खटिएका डा. अनुप बाँस्तोलाले कोभिशिल्ड खोप लगाएर सुभारम्भ गर्ने भएका छन् । बुधबार नै टेकु अस्पतालका अग्रमोर्चामा खटिएकाहरुले खोप लिने निर्देशक डा.राजभण्डारीले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणको खोप अभियान शुरु गरेको १० दिनभित्र अभियान सम्पन्न जनाएको छ । खोप अभियानको १० दिनको अवधिमा करिब ३५ सय जनालाई टेकु अस्पतालबाट खोप दिने उनले बताए । शुक्रराज अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनामा खटिएका २ सय ६४ जना चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरसफाइकर्मीले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने उनले बताए ।
उता सशस्त्र प्रहरी बलम्बु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रुपक महर्जनले अस्पतालमा खोप लगाएर यस अभियानको सुरुवात गर्ने भएका छन् । बलम्बु अस्पतालमा आज१०० जनालाई कोरोनाविरुद्धको कोभिशिल्ड खोप दिने डाक्टर प्रविण नेपालले बताए । खोप अभियान अवधिभर करिब १५ सय जनालाई खोप अस्पतालबाट दिइने उनले सुनाए । बलम्बु अस्पतालमा चन्द्रागिरी नगरपालिका क्षेत्रका पहिलो चरणको खोप लगाउने मापदण्डमा परेकाहरुलाई खोप दिइने उनले बताए ।
यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल टिचिङका कोभिड वार्डका संयोजक तथा फोक्सो रोग विशेषज्ञ डा.सन्तकुमार दासका अनुसार ६ वटा अस्पतालका प्रथम चरणको खोप लगाउने मापदण्डमा परेका व्यक्तिलाई खोप दिइन्छ ।
टिचिङ अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले पहिलो खोप लगाएर अस्पतालमा खोप अभियानको सुरु गर्ने उनले बताए ।
टिचिङ अस्पतालका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई खोप दिने उनले बताए । एक दिनमा ४ सय जनालाई खोप दिने अस्पतालले तयारी गरेको छ । आज खोप कार्यक्रम १० बजे उदघाटन भएपनि बिहिबारदेखि बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म खोप दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने डा.दास बताउँछन् । बुधबार टिचिङका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई खोप दिइने छ भने बिहिबार मन्त्रालयले खोप लगाउनेको नामलिस्ट पठाएपछि सोहीअनुसार खोप दिइने उनले बताए । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र बिपी कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, चिरायु अस्पताल र इशान बाल अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि टिचिङ अस्पतालमै खोप लगाउने डा.दासले बताए । केही अस्पतालबाट कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको नामावाली आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
प्रदेश तहमा कोरोनाविरुद्धको खोप प¥याएपनि उपत्यकाका धेरै अस्पतालको खोप बुधबार नै पु¥याउने भएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट खोप अभियानमा करिब ७ हजारले लगाउने भएका छन् । यस्तै वीर अस्पातलका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीका अनुसार दिनमा ६ सय जनालाई खोप दिने योजना बनाइएको छ । वीर अस्पतालबाट करिब ३ हजार जनालाई कोभिशिल्ड खोप दिइने डा.सेन्चुरी बताउँछन् । वीर अस्पतालबाट खोप लगाउनेका नाम दर्ता भएपनि केही अस्पतालका रजिष्टे«शन बाँकी रहेका उनले सुनाए । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, नर्सिङ क्लेजका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नामसूचीका आधारमा दिनमा ६ सय जनालाई खोप दिने डा. सेन्चुरीको भनाइ छ । वीर अस्पतालले स्वास्थ्यकर्मीसँगै अन्य ५ वटा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको नामावलीको आधारमा खोप दिने उनले बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं मेडिकल कलेज जोरपाटी, शहीद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, शहीद गङ्गालालमा पनि खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ । किष्ट मेडिकल कलेज र आनन्द वन अस्पतालमा पनि खोप केन्द्र रहने छ । भक्तपुरमा भक्तपुर अस्पताल र कोरियामैत्री अस्पतालमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
पहिलो चरणमा ४ लाख ३० हजारलाई खोप प्रदान गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौंमा १२, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरका २ अस्पतालमा खोप केन्द्र सञ्चालन हुन लागेको हो । सातै प्रदेशमा रहेका ६२ अस्पताल र १२० भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट सूचीकृत व्यक्तिलाई एकै साथ खोप दिइने भएको छ ।
यस्तै यही माघ १८ गतेभित्र ७७ जिल्लाका ३०० खोप केन्द्रमार्फत खोप प्रदान गरिने खोप शाखाको तयारी छ । देशका सातै वटा प्रदेशमा कोरोनाविरुद्धको खोप पुगिसकेको छ । लक्षित समूहले मात्र खोप पाएको वा पाएनन भनेर पारदर्शी ढंगले जानकारी प्रवाह गर्न सम्बन्धित संस्थाले खोप पाउने व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यात्रुसँग बढी भाडा असुलेको आरोपमा एकजना पक्राउ